लूका १३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
१३ त्यसबेला, त्यहाँ उपस्थित कसै-कसैले बलिदान चढाइरहेका केही गालीलीहरूको पिलातसले हत्या गरे भनेर उहाँलाई खबर दिए। २ तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “के तिमीहरू यस्तो घटनाको सिकार हुने गालीलीहरूलाई अरू सबै गालीलीहरूभन्दा बढ्ता पापी ठान्छौ? ३ म तिमीहरूलाई भन्छु, त्यसो होइन तर तिमीहरूले पश्‍चात्ताप गरेनौ भने तिमीहरू सबै पनि तिनीहरूजस्तै नष्ट हुनेछौ। ४ त्यसैगरि, सिलोआमको धरहरा ढल्दा त्यसले थिचेर मर्ने अठार जनालाई के तिमीहरू यरूशलेमका अरू सबै बासिन्दाहरूभन्दा बढ्ता ऋणी* ठान्छौ? ५ म तिमीहरूलाई भन्छु, त्यसो होइन तर तिमीहरूले पश्‍चात्ताप गरेनौ भने तिमीहरू सबै पनि तिनीहरूजस्तै नष्ट हुनेछौ।” ६ त्यसपछि, उहाँले तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त सुनाउनुभयो: “कुनै एक जना मानिसले दाखबारीमा अन्जीरको रूख लगाएको थियो अनि त्यसमा फल लागेको छ कि भनेर खोज्दा उसले केही भेटेन। ७ तब उसले बगानको मालीलाई भन्यो: ‘मैले यस अन्जीरको रूखमा फल खोज्न थालेको तीन वर्ष भइसक्यो तर अहिलेसम्म एउटै फेला पारिनँ। त्यसैले यसलाई काटिदेऊ! यसलाई किन बेकारमा जमिन ओगट्न दिने?’ ८ मालीले उसलाई जवाफ दियो: ‘मालिक, यसलाई यो वर्ष यत्तिकै रहन दिनुहोस्, म यसको वरिपरि खनेर मल हाल्छु। ९ यसले फल फलायो भने बेसै भयो, होइन भने, काट्न लगाउनुहोला।’ ” १० एकपटक विश्राम-दिनको बेला उहाँ कुनै एउटा सभाघरमा सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। ११ अनि हेर, दुष्ट स्वर्गदूतले बितेको अठार वर्षदेखि कमजोर बनाइराखेको एउटी स्त्री त्यहाँ थिई। कुप्री भएकीले ऊ ठाडो उभिन सक्दिनथी। १२ त्यस स्त्रीलाई देखेपछि येशूले उसलाई बोलाउँदै भन्नुभयो: “ए नारी, तिम्रो दुर्बलताबाट तिमी मुक्त भयौ।” १३ अनि उहाँले ऊमाथि आफ्नो हात राख्नुभयो। उत्तिखेरै ऊ ठाडो भएर उभिई र परमेश्वरको महिमा गर्न थाली। १४ येशूले यसरी विश्राम-दिनमा निको पार्नुभएको देखेर रुष्ट भएका सभाघरका पदाधिकारीले भीडलाई यसो भने: “काम गर्नका लागि छ दिन छुट्टयाइएको छ। त्यसैले ती दिनमा आएर निको होओ, विश्राम-दिनमा होइन।” १५ तर प्रभुले तिनलाई यस्तो जवाफ दिनुभयो: “कपटीहरू हो, के तिमीहरू विश्राम-दिनमा आफ्नो गोरु वा गधालाई किलाबाट फुकाएर पानी खुवाउन लैजादैनौ? १६ त्यसोभए हेर, सैतानले बितेको अठार वर्षदेखि बाँधेर राखेको यो स्त्री, जो अब्राहामकी छोरी हुन्‌, उसलाई विश्राम-दिनमा फुकाउनु के उचित होइन?” १७ उहाँको यो कुरा सुनेर उहाँका सबै विरोधीहरू लाजले भुतुक्क भए तर भीडमा हुनेजति सबै भने उहाँले गर्नुभएका यी सब आश्चर्यजनक कामहरू देखेर खुसी भए। १८ अनि उहाँले अझै यसो भन्नुभयो: “परमेश्वरको राज्य के जस्तो हो र त्यसलाई म केसित तुलना गरूँ? १९ त्यो त रायोको दानाजस्तो हो, जसलाई एक जना मानिसले आफ्नो खेतमा रोप्यो र त्यो बढेर रूख बन्यो अनि त्यसका हाँगाहरूमा आकाशका चराचुरुङ्गीहरू बास बस्न थाले।” २० उहाँले फेरि यसो भन्नुभयो: “परमेश्वरको राज्यलाई म केसित तुलना गरूँ? २१ त्यो त खमिर जस्तो हो, जसलाई एक जना स्त्रीले तीन भाँडो* पीठोमा मिसाई र पूरै पीठो खमिरा नहोउन्जेलसम्म राखिछोडी।” २२ अनि उहाँ सहर-सहर र गाउँ-गाउँमा सिकाउँदै यरूशलेमतिर जानुभयो। २३ तब कोही एक जना मानिसले उहाँलाई सोध्यो: “हे प्रभु, के थोरैले मात्र उद्धार पाउँछन्‌?” उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: २४ “साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्न भरमग्दुर कोसिस गर। किनकि म तिमीहरूलाई भन्छु, धेरै जनाले भित्र पस्न कोसिस गर्नेछन्‌ तर सफल हुनेछैनन्‌। २५ अनि घरधनीले ढोका बन्द गरिसकेपछि तिमीहरू बाहिर उभिएर ढोका ढक्ढक्याउँदै यसो भन्नेछौ: ‘ए हजुर, हामीलाई ढोका खोलिदिनुहोस् न।’ तर उसले तिमीहरूलाई भन्नेछ: ‘तिमीहरू कहाँबाट आएका हौ, मलाई थाह छैन।’ २६ तब तिमीहरूले यसो भन्न थाल्नेछौ: ‘हामीले तपाईंकै अगाडि खायौं, पियौं अनि तपाईंले हामीलाई चौबाटोमा सिकाउनुभयो।’ २७ तर उसले तिमीहरूलाई यसो भन्नेछ: ‘तिमीहरू कहाँबाट आएका हौ, मलाई थाह छैन। ए कुकर्मीहरू हो, मबाट पर हटिहाल।’ २८ जब तिमीहरूले अब्राहाम, इसहाक, याकूब अनि सबै भविष्यवक्ताहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र तर आफूलाई भने बाहिर पाउनेछौ, तब रोदन अनि वेदनाको चीत्कार हुनेछ। २९ साथै, पूर्व, पश्‍चिम, उत्तर अनि दक्षिणबाट मानिसहरू आउनेछन्‌ र परमेश्वरको राज्यमा खान बस्नेछन्‌। ३० अनि हेर, जो पछिल्ला छन्‌, ती पहिला हुनेछन्‌ र जो पहिला छन्‌, ती पछिल्ला हुनेछन्‌।” ३१ त्यतिखेरै केही फरिसीहरू आएर उहाँलाई यसो भने: “यहाँबाट निस्केर गइहाल्नुहोस्, किनभने हेरोदले* तपाईंलाई मार्न खोज्दैछन्‌।” ३२ अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “जाओ, त्यस फ्याउरोलाई* भनिदेओ: ‘हेर, म आज र भोलि दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई धपाउँछु अनि बिरामीहरूलाई निको पार्छु अनि तेस्रो दिनमा आफ्नो काम सिध्याउनेछु।’ ३३ तैपनि आज, भोलि अनि पर्सिसम्म मैले आफ्नो यात्रा जारी राख्नै पर्छ, किनकि भविष्यवक्ता यरूशलेमबाहिर मारिनु उचित हुँदैन। ३४ यरूशलेम, हे यरूशलेम, तँ जसले भविष्यवक्ताहरूलाई मारिस् र आफूकहाँ पठाइएकाहरूलाई ढुङ्गाले हानिस्! कुखुरीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेटामुनि बटुलेझैं मैले तेरा छोराछोरीहरूलाई कत्ति पटक बटुल्न चाहें! तर तिमीहरूले मानेनौ। ३५ हेर, परमेश्वरले तिमीहरूको घरलाई त्याग्नुहुनेछ। म तिमीहरूलाई भन्छु, तिमीहरूले मलाई कुनै पनि हालतमा देख्नेछैनौ, जबसम्म तिमीहरू यसो भन्दैनौ: ‘यहोवाको नाममा आउने धन्यका हुन्‌!’ ”
^ लूका १३:४ * वा, “पापी।”
^ लूका १३:२१ * लगभग दस किलो।
^ लूका १३:३१ * लूका ३:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ लूका १३:३२ * इस्राएलमा फ्याउरोलाई धूर्त जनावर ठानिन्थ्यो।